ISAKRAMENTI YOMTSHATO NEBANDLA LESITHATHU
Umtshato sisenzo esingcwele emehlweni kaThixo. Funda kweli nqaku ukubaluleka kunye nexabiso le umthendeleko womtshato kwiCawe yamaKatolika, umanyano phakathi kwendoda nomfazi oluya kuba luhlukanisiwe kwaye lube ngunaphakade.
1 Ixabiso leSigramente somtshato
1.1 Ke yintoni umthendeleko womtshato?
2 Iinjongo kunye nokuphela komtshato
2.1 Utata kwisakramente somtshato
3 Kuthekani ukuba umtshato uneengxaki?
Ixabiso leSigramente somtshato
Emehlweni eNkosi, umtshato phakathi kwamaKristu amabini abhaptiziweyo sisenzo somanyano esiza kuhlala ixesha elide ebomini, sisekwe eluthandweni kwaye sijamelene nabuphi na ubunzima. Ngoku, masiqale senze ukuqonda okungcono malunga nokuba le manyano iquka ntoni, ngaphambi kokuba sithethe ngayo umthendeleko womtshato.
Umtshato uqukethe umanyano, eyenziwa phakathi kwendoda nomfazi, ngenjongo yokuba amaqabane enze iqela elingahlukaniyo, elijolise ekuncedaneni, baxhasane xa bejamelene nobunzima, bazale, kwaye ngenxa yoko bafundise abantwana babo.
Ukuze kungabikho kungqubana kwayo nayiphi na imeko emtshatweni, abatshatileyo kufuneka bamkele enye njengoko injalo, kwaye bobabini banegalelo koko banako, bephumeza kunye iinjongo zabo kunye nosindiso emehlweni kaThixo.
Umtshato usekwe kuthando phakathi kwabatshatileyo, uthando emehlweni kaThixo lolwaphakade, ukunikezela ngomzimba nomphefumlo kuthando lwakhe, behambelana njengabantu.
Ngoku, kukho umtshato waseburhulumenteni, eyindlela yokudibanisa phambi kwegunya elithile kwezentlalo nakwezomthetho, unika ubunyani phambi kukarhulumente umanyano lwabantu ababini abathandanayo. Nangona kunjalo, yindlela yokujoyina ayisebenzi kumaKristu angamaKatolika.
Ke yintoni umthendeleko womtshato?
El Umthendeleko womtshato emva koko, njengoko kuyalelwa yiCawa yamaKatolika, umanyano phakathi kukaYesu Krestu neBandla, enika abatshatileyo okanye abo bangene kwisivumelwano ubabalo lokuba bakwazi ukuthandana ngomzimba nangomphefumlo ngonaphakade; uthando olufana nolukaKristu kwicawe yakhe.
Ngale ndlela, umtshato awunakunyibilika, enikela ubungcwele kuye ngenxa yomanyano olungunaphakade. Ngaye umthendeleko womtshato, UPablo uthi:
"Madoda, bathandeni abafazi benu njengokuba noKrestu wayithandayo iCawe. Le yimfihlakalo enkulu, ndiyithetha malunga noKrestu neBandla."
Umtshato wamaKristu abhaptiziweyo, emehlweni omdali, uphakanyiselwe kuzuko lwesakramente kunye nobabalo lukaYesu Krestu; Yimanyano ezalwa liziko likaThixo.
Iinjongo kunye nokuphela komtshato
Xa umtshato usenzeka, abatshatileyo kufuneka bakhumbule ukuba, nokuba sisenzo somanyano kwinkululeko (kuba akukho mntu ubanyanzelayo ukuba batshate), kufuneka kukhunjulwe ukuba, njengokuba uMbuso unika amalungelo, nawo uyabanika izibophelelo.
Umntu wamkela umsebenzi ngokuzithandela, kodwa kufuneka azi ukuba kufuneka babe noxanduva lokufezekisa uxanduva lwabo lomsebenzi.
Ngale ndlela, umtshato wenza ukuba amaqabane kufuneka angaziniki kuphela umzimba nomphefumlo kuthando lwakhe, kodwa nokuzalisekisa ukuthanda kukaThixo, ukuvelisa nokuzala abantwana abazelwe kumanyano lomtshato. Emva komtshato, xhasanani ukufezekisa usindiso kunye nokukhula kwabo ngokwabantu njengabantu, ngokuthobela imiyalelo ebekwe kwibhayibhile.
Ngokunjalo, ukuthembeka luxanduva kwi umthendeleko womtshato, kuba iqhina liyimveliso yothando, ekufuneka ithembekile njengothando lukaThixo kuthi. Emehlweni kaThixo sisenzo esingcwele, esingenakunyibilika, ekufuneka ukuthembeka kuphelele, kungenakuphikiswa, apho omabini amaqabane abeka ubomi bawo kuthando lukaKristu lwecawe yakhe.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Umthandazo ngomtshato.
Utata kwisakramente somtshato
Ngokomthetho-siseko, umtshato wenzeka xa aba babini, kuthando lwabo bobabini, benikezela umzimba nomphefumlo phambi kukaKristu, nangokuthembeka okupheleleyo, ukuze kamva, ngenxa yesini sabantu, into eyaziwa ngokuba "sisenzo sokutshata" okanye " ukupheliswa komtshato ”; NguThixo otywina iqhina xa umtshato ugqityiwe.
Ngenxa yesenzo sokutshata, enye yeenjongo zomtshato iyazaliseka: ukuzala. Ukuba ngutata yenye yeenjongo ezisisiseko kumthendeleko womtshato.
Esi sipho sinikezwe nguMdali, sinika abalingane inkululeko yokuthatha isigqibo malunga nokuba bangaphi abantwana abaza kubazisa emhlabeni, kwaye baya kuba noxanduva lokukhulisa kwikhaya lamaKristu elinemfundo kunye neenqobo ezisemgangathweni, kunye nothando olunzulu, kuba abantwana intsikelelo enikwe nguThixo.
Kuthekani ukuba umtshato uneengxaki?
Zininzi izizathu zokuba kutheni umtshato ungajongana nobunzima, kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba, ngokwenza esi senzo singcwele, esi sibini sizibophelele «thembeka kuwe ekuchumeni nasembandezelweni, empilweni nasekuguleni »isithembiso esenziwa phambi kwamehlo kaThixo.
Ngale ndlela umtshato utywinwe, emva koko ngokugqibeleleyo, umanyano lomelezwa njengesenzo esingangxengwanga esingcwele. Ngale ndlela, ukuba kukho nabuphi na ubunzima, obunjengobunzima bokuhlala kunye ngokwasempilweni, bobabini bangaya ekwahlukaneni, kodwa bengayeki ukuba yindoda nomfazi phambi koThixo, ekungavumelekanga ngabo bobabini ukwenza isivumelwano somanyano olutsha .
Ewe, xa behlukana, esi sibini kufuneka siphile ngokwahlukana kwabo ngokuthembeka, kwaye iCawa yamaKatolika icebisa uluntu lwamaKrestu ukuba lukhuthaze uxolelwaniso lwesibini.
Ngoku, kuxhomekeke kwilizwe ahlala kulo amaqabane, uqhawulo-mtshato lunokwenziwa, yimithetho yoluntu, nangona emehlweni kaThixo besengumyeni nenkosikazi, kuba umanyano lwatywinwa njengesenzo esingcwele nesingenakophulwa.
Ukuba omnye okanye bobabini abaqhawule umtshato bangena kwimanyano entsha, ayizukusebenza kwiCawa yamaKatolika, ethembekile kwilizwi likaKristu, owathi:
«Othe wamala umfazi wakhe, wazeka omnye, uyakrexeza kulowa; Nokuba umfazi uthe wayala indoda yakhe, wendela kwenye, uyakrexeza.
Xa ujongene nobunzima, eyona ndlela yokuphuma kuyo kufuneka ibe ngumthandazo, kwaye ubeke uKristu embindini wobomi babo bobabini abatshatileyo, ukuze ngale ndlela bakwazi ukusombulula iingxaki zabo kwaye bafumane uxolelwaniso.
El umthendeleko womtshato Inika amaqabane amaKatolika abhaptiziweyo amandla okuthandana ngothando, njengoKrestu kwiCawe yakhe, ejolise ekuncedeni esi sibini sikhule ngokupheleleyo njengabantu.
Ngokunjalo, ngumanyano oluneziqhamo, apho esi sibini siya kufumana isipho sobutata; kwaye ngamnye wabantwana bakhe uyintsikelelo evela kuThixo.
Ukuba ufuna ukufunda nangakumbi ngokubaluleka, intsingiselo kunye nexabiso lomthendeleko womtshato, le vidiyo ilandelayo iya kuphendula imibuzo yakho: